तस्करीको नया तरिका महिलाको प्रयोग ६ केजी सुन समातियो::देश र जनताप्रति समर्पित
तस्करीको नया तरिका महिलाको प्रयोग ६ केजी सुन समातियो
काठमाडौं – त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट अबैध सुन नेपाल भित्र्याउन भारतीय महीलाको प्रयोग हुने गरेको खुलेको छ । करिब ६ किलो सुनसहित ४ जना महिला विहीबार पक्राउ परेसँगै तस्करले अपनाएको नयाँ तरीका बाहीर आएको हो । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
पक्राउ पर्नेमा बबिता गर्ग, सरिता जैन, जपिन जैत र सुनिता रहेका छन् । उनीहरुको साथबाट भेटिएको धातुमध्ये ४ सय ९७ ग्राम सुन भएको पुष्टि भइसकेको र बाँकी सुनजस्तै पहेलो धातुको परीक्षण भइरहेको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्दिप भण्डारीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभएको छ । बैककबाट काठमाडौं आएको ५ किलो ४ सय ग्राम सुन सहित भारतीय महिला पक्राउ परेका हुन ।
विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय प्रमुख एसएसपी भण्डारीले समाचारपत्रलाई दिएको जानकारी अनुसार गहनाको स्वरूपमा लेप लगाएको अवस्थामा भित्र्याइएको उक्त सुन बरामद गरिएको हो।
पक्राउ परेकाहरु थाइ एयरलाइन्सको विमानबाट बैंकक हुँदै काठमाडौं आएका थिए ।
मलद्वार भित्र यसरी छिराएर ल्याए साढे तीन किलो सुन हेर्नुस
चार किलो सुनसहित चिनियाँ नागरिक विमानस्थलबाट पक्राउ
सुन तस्करलाई जनक होटेलमा खाने-बस्ने देखी भाडाको व्यवस्था !
आजबाट दशैंकाे लागि टिकट बुकिङ खुल्लाा कहाँ कहाँ पाइन्छ टिकट ? दसैं, तिहारमा राजधानीबाट बाहिरिने यात्रुका लागि सार्वजनिक यातायातको टिकट बुकिङ आजदेखि खुलेको छ । दशैंमा काठमाडौंबाट बाहिरिने यात्रुका लागि यातायात व्यवसायी महासंघले आजदेखि अग्रीम टिकट...
किन थन्किए दशैकाे सामान केरुङ ? यसपालि दशैकाे लागि भनेर ल्याइएका सामानहरु केरुङ नाका मै थन्कियका छन। केरुङमा सामान लोड गर्न खाली कन्टेनर नहुँदा नेपाल ल्याउन लागिएका दसैं र तिहारका...
दशैंमा सिङमा हरियो लगाएको खसी किन्नुस् है ! दशैं त आउनै लाग्यो, कस्तो खसी–बोका किन्दै हुनुहुन्छ ? सिङमा रातो लगाएको कि हरियो लगाएको ? किन्ने नै भए सिङमा हरियो लगाएको किन्नुस् है। किनकि...
‘कहाँ जाने ? जहाँ मन शान्त हुन्छ…’
कहाँ जाने ? त्यहीँ, जहाँ जान आवश्यक छ जहाँ अपमान होइन सम्मान हुन्छ जहाँ
विप्लवको गाउँमा युवाहरुको मार्चपास दलालहरुलाइ लखेट्ने घोषणा
सरकार द्धारा प्रतिबन्धित नेत्र बिक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
अभिनेत्री केकी फेरि दुर्घटनामा परिन, यस्ताेे छ अवस्था
अभिनेत्री केकि अधिकारी दाेश्राे पटक सडक दरघटनमा परेकि छन् । काठमाडौं
कुमारको परिवार न्याय खोज्दै काठमाडौमा, गिरफ्तार गरेर १५ गोली हानिएको भाइको दावी
प्रहरीद्वारा भएको असार ५ गते सर्लाही लालबन्दी नगरपालिका–१ का कुमार पौडेलको
हवाई सेवामा टिकट बुकिङ खुल्ला १०% सम्म छुट, कहाँ कसरी छ टिकट अनि छुट
नेपाल वायुसेवा संघले दशैं, तिहार र छठलाई लक्षित गर्दै हवाई सेवामा